Nagarik Shukrabar - प्राकृतिक रुपमा परिवार नियोजन गर्ने तरिका
सोमबार, १० बैशाख २०७५, ०५ : ३२
प्राकृतिक रुपमा परिवार नियोजन गर्ने तरिका
शनिबार, २५ मङि्सर २०७३, १० : ४५ | डा. सुबोधकुमार पोखरेल , Kathmandu
प्राकृतिक परिवार नियोजनको पनि विधि हुन्छन् भन्ने सुनेको छु । प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि भनेको के हो ? यो कसरी गरिन्छ ?
मानिसले हजारौँ वर्षदेखि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । आज हामीसँग धेरै सुरक्षित र प्रभावकारी परिवार नियोजनका साधन छन् । हरेक साधनका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । तर, परिवार नियोजनका सबै साधनबारे राम्रो ज्ञान राख्ने हो भने आफूलाई सुहाउँदो साधन छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । परिवार नियोजनका साधनलाई मुख्यतः दुई भागमा बाँडिएको छ, प्राकृतिक परिवार नियोजन र कृत्रिम परिवार नियोजनका साधन ।
प्राकृतिक परिवार नियोजनमा कुनै पनि साधन प्रयोग हुँदैन । आफ्नो शरीरको व्यवहारलाई राम्रोसँग बुझेर र त्यो ज्ञानलाई गर्भ रहनबाट बचाउन प्रयोग गरिन्छ । यसमा महिला र पुरुष दुवैले ध्यान दिएर यो ज्ञानलाई सही तवरले प्रयोग गर्नुपर्छ । कृत्रिम परिवार नियोजनको तुलनामा प्राकृतिक परिवार नियोजन कम भरपर्दाे हुन्छ ।
यस विधिमा महिलामा डिम्ब बन्ने समयको ज्ञानलाई प्रयोग गरिन्छ । यसले महिलालाई आफ्नो महिनावारीको समय तालिकालाई ध्यान दिएर, गर्भ रहन सक्ने समयबारे थाहा पाउन मद्दत गर्छ ।
पात्रो विधि प्रयोग गर्नुअघि महिलालाई आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको महिनावारीको विस्तृत विवरण थाहा हुनुपर्छ । हरेक महिना महिनावारी सुरु भएको दिनको अन्तराललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा छोटो महिनावारीको अन्तराल पत्ता लगाउनुपर्छ । र, सबैभन्दा छोटो अन्तरालबाट २१ दिन घटाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि छ महिनामा सबैभन्दा छोटो अन्तराल २७ दिनको छ भने यसबाट २१ दिनबाट घटाउँदा ६ दिन आउँछ । यो भनेको महिनावारी सुरु भएपछिको छैटौँ दिन हो भनी बुझ्नुपर्छ । अब महिनावारीको सबैभन्दा लामो अन्तरालबाट ११ दिन घटाउनुस् । उदाहरणका लागि महिनावारीको सबैभन्दा लामो अन्तराल ३१ दिन थियो भने यसबाट ११ दिन घटाउँदा २० दिन हुन आउँछ ।
यसरी निकालेको दिनलाई कागजमा टिप्नुस् । यसरी हिसाब निकालेर सम्भोगका लागि गर्भ नरहने दिनहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ । जसलाई सुरक्षित समय भनिन्छ । माथिको उदाहरणमा महिनाको एक गतेदेखि छ गतेसम्म र २१ गतेदेखि अर्काे महिनावारीको पहिलो दिनसम्म सम्भोगका लागि सुरक्षित समय हो । महिनाको सातौँ दिनदेखि २० औँ दिनसम्म सम्भोगका लागि असुरक्षित समय हो अर्थात् यी दिन सम्भोग गरे गर्भ रहन सक्छ ।
पात्रो विधिलाई भरपर्दो रूपमा प्रयोग गर्न महिनावारीको अन्तरालको सही हिसाब गर्नुपर्छ । त्यस्तै, गर्भवती हुन नचाहने हो भने महिलामा असुरक्षित समयमा शारीरिक सम्पर्क नगरी बस्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ अथवा वैकल्पिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । सही तरिकाले प्रयोग गरिएमा विधि ९१ प्रतिशत प्रभावशाली हुन्छ ।
प्राकृतिक विधि भएकाले यसका नराम्रा असर छैनन् । न कुनै उपकरण या प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ । यो विधि अपनाउने महिलालाई महिनावारीबारे विस्तृत जानकारी हुन थाल्छ ।
तर, यो विधिमा महिनावारीको अन्तराललाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ र असुरक्षित समयमा सम्भोग नगर्ने आत्मशक्ति हुनुपर्छ ।
योनि रस विधि
यस विधिमा योनिबाट निस्कने सेतो पानीको महिनाको दिनअनुसार फरक हुने विशेषतालाई प्रयोग गरिन्छ । महिनाभरि महिलाको योनिबाट निस्कने सेतो पानीको विशेषता फरक हुन्छ । महिलामा हुने हार्मोनहरूको अस्थिरताले यस्तो हुन्छ । रसको प्रकारअनुसार महिलामा डिम्ब बन्ने समय पत्ता लगाउन सकिन्छ । डिम्ब बन्नुभन्दा अघि योनि रस पारदर्शी, पानीजस्तो, पहेँलो, धेरै मात्रामा हुन्छ । डिम्ब बनेको समयमा यो बाक्लो, गिलो र धागोजस्तो हुन्छ । डिम्ब बनेको समयपछि यसको मात्रा घट्छ, बाक्लो हुन्छ, चिपचिपे हुन्छ । डिम्ब बन्नुअघि रस पारदर्शी र पानीजस्तो हुने हुँदा पुरुषको वीर्यलाई पाठेघरमाथि आउन मद्दत गर्छ भने डिम्ब बनेको समयपछि रसको मात्रा घट्ने, बाक्लो र चिपचिपे हुने हुँदा यसले वीर्यलाई पाठेघरमाथि आउन रोक्छ ।
यो विधि कसरी प्रयोग गर्ने त ? हरेक बिहान अलिकति योनि रसलाई आफ्नो औँलाले निकाल्ने र यसलाई दुइटा औँलाको बीचमा दबाउने र त्यसपछि औँलालाई छुट्याउने । यसो गर्दा रस धागोजस्तो लामो भयो भने तपाईं सम्भवतः डिम्ब बनेको समयमा हुनुहुन्छ ।
तर, हालै सम्पर्क भएको हो भने रसको प्रकृति थाहा पाउन अलि गाह्रो हुन्छ । यो विधिमा पूर्णतः निर्भर हुन सकिन्न ।
शरीरको तापक्रम विधि
महिलाको गर्भवती हुने सबैभन्दा धेरै सम्भावना डिम्ब बनेका समयमा हुन्छ । यो विधिले महिलालाई डिम्ब बन्ने समयको अनुमान गर्न मद्दत गर्छ । डिम्ब बनेको समयपछि महिलाको शरीरको तापक्रम आधा डिग्रीले बढ्छ ।
यस विधिलाई प्रयोग गर्न हरेक बिहान खाटबाट उठ्नुअघि महिलाले शरीरको तापक्रम नाप्नुपर्छ । तापक्रम नाप्दा हरेक दिन एउटै थर्माेमिटर प्रयोग गर्नुपर्छ र एकै समयमा तापक्रम नाप्नुपर्छ । हरेक दिनको तापक्रमलाई कागजमा टिप्नुपर्छ । जतिबेला तीन वटा क्रमिक तापक्रम सामान्यभन्दा बढी हुन्छ, त्यतिबेला डिम्ब बनेको समय अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सुरक्षित दिन कति दिनसम्म हुन्छ त ? प्रायः डिम्ब बनेको तेस्रो दिन अथवा तापक्रम बढेको तेस्रो दिनपछि महिला सुरक्षित समयमा प्रवेश गर्छिन् र यस्तो बेलामा सम्पर्क भएमा गर्भ नरहने अवस्था हुन्छ ।
यस विधिको बेफाइदा भनेको डिम्ब बन्नुभन्दा अगाडिको असुरक्षित समयको अनुमान गर्न नसकिनु हो । महिलालाई कुनै कारणले ज्वरो आएको छ भने यो विधिमा अन्योल उत्पन्न हुन्छ ।
यस विधिमा पुरुषले वीर्य स्खलन हुनुअघि नै महिलाको योनिबाट लिंग निकाल्नुपर्छ । तर, लिंग निकाल्नुअघि नै वीर्य स्रावमा छ भने गर्भ रहन सक्छ ।
यौन सम्बन्धपछि महिलालाई पछुतो किन हुन्छ ?
अचानक कसैसित शारीरिक सम्बन्ध हुनुलाई क्याजुअल सेक्स भनिन्छ । पहिला सहमतिमै सम्बन्ध बन्छ तर क्याजुअल सेक्सपछि प्रायः महिलामा पछुतोको भावनाले घेर्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार सेक्सको पहल युवतीले गर्छे र यसमा उसलाई रमाइलो अनुभूति भयो भने पछुतो हुँदैन ।
२०७४ मा स्वास्थ्य : रोकियो भाडाको कोख
चिकित्सा शिक्षाको आवरणमा भइरहेको बदमासीका घटना सार्वजनिक भए । तर संलग्न कारबाहीको दायरामा आएनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसीको अभियान यो वर्ष पनि रोकिएन ।
काम्ने रोग मनको भुइँचालो
किशोर उमेरका युवतीमा बढी मानसिक समस्या देखिन्छ । यो उमेरमा पढाइदेखि यौन हिंसाको डर, विवाहको दबाब, कामको जिम्मेवारी, हार्मोनल चेन्ज लगायतका कारणले काम्ने मानसिक रोगको सिकार हुन्छन् ।
‘सुन्नासाथ नरमाइलो लाग्यो, मिलून्’
हास्यकलाकार मनोज गजुरेल र मीना ढकालबीच भएको डिभोर्स व्यक्तिगत विषय भए पनि जनचासो कम छैन । यो घटना सार्वजनिक भएसँगै चित्त दुखाउने आम नागरिक धेरै भेटिए । मनोज–मीना ट्रयाजेडीबारेको जनमत यस्तो छ :
मेरो नजरमा रत्नपार्क
यो ठाउँमा थरिथरिका मान्छे आएका हुन्छन् । म यो ठाउँमा बसेको करिब १० वर्ष भइसक्यो । नयाँ नौलो मान्छेहरु देख्नै नहुने ! जाने हो ? भनेर सोधिहाल्छन् । एक्कासि त सोध्दैनन् तर एकछिन हिँडडुल गर्दा शंका गरिहाल्छन् र जाने हो भनेर सोधिहाल्ने गरेको देखेको छु । जब साँझ–साँझ पर्छ, यहाँ देह व्यापार गर्नेहरुको जमघट सुरु हुने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन नजिकै भएर के गर्नु ?
चुुनावमा कस्ता नेतालाई चुन्दै हुनुहुन्छ ?
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई चुनावले छोइसकेको छ । आफ्नो र योग्य प्रतिनिधि छान्नका लागि कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने राजधानीका चिया पसलदेखि होटेलसम्म बहस सुरु भइसकेको छ ।
दसैँको यात्रा कस्तो भयो ?
गुल्मीबाट बुटवल एक दिन लाग्छ । त्यहाँबाट रात्रि बस चढेर काठमाडौँ आयौँ तर आउँदा नवलपरासीमा आइनपुग्दै गाडीको टायर पङ्चर भएर निकै समय त्यहस् ठाउँमा बस्नु प¥यो । दसैँका बेला थोत्रा गाडी चलाइने हुनाले यसपालिको दसैँ सुखदुःख मनाउनु पर्यो ।
Copyright 2016 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.